Onye ndu ahụ na-arụ ọrụ dị oke mma nke ịgagharị na atụmatụ, esemokwu dị iche iche, yana ngwaọrụ nke atụmatụ inbound na atụmatụ ọpụpụ. Ọ bara uru ịgụ ya nke mere gaa lelee ya. Nke a bụ otu n'ime eserese ahụ:
Anyị na ụlọ ọrụ ndị obere obere ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Enweghi otu iwu a m na-eke:
Ma nke ahụ bụ oge dị oke egwu nke ma ndị otu na-apụ apụ kwesịrị itinye ọtụtụ nleta iji zụlite ndu, tinye nrụgide na-enweghị isi iji mechie ire ahụ, ma ọ bụ tufuo gị onye asọmpi na-arụ ọrụ ka mma na ahịa ahịa ha.
Kasị njọ, ọ bụrụ na ndị asọmpi gị na-anọchi anya ya nke ọma, ugbu a ị nwere atụmanya na-ekpo ọkụ nke ga-amalite ịzụ ahịa. Ma dịka ha na-enyocha ọnọdụ pụrụ iche nke onye na-asọmpi gị na ndị isi na oghere ahụ, ha ga-enwe obi abụọ ma ha nwere ike iji ọrụ gị ma ọ bụ na ha agaghị.
M ga-agbakwunye gem ọzọ ebe a… inbound na-arụ ọrụ nke ọma na ịpụ ahịa ahịa, kwa! You nwetụla mgbe ị kpọtụrụ anya na atụmanya ebudatara ihe ole na ole, na-emepe emepe ma na -pị akwụkwọ akụkọ email gị ma na-eleta saịtị gị kwa oge?
Tags: inbound marketinginbound ahịa nduinbound vesos outboundinbound na mpụgaahia n'èzíndu ahia ahiandụmọdụvesosvs